Maayar Ku Xigeenka Caasimada Hargaysa Oo Madmadaw Galiyay Nabag-Gelyadda Ay Somaliland Haysatay | Raadgoob
Maayar Ku Xigeenka Caasimada Hargaysa Oo Madmadaw Galiyay Nabag-Gelyadda Ay Somaliland Haysatay
Maayar ku xigeenka Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi (Caga Wayne) ayaa mad madow galiyey nabad galyada ay somaliland haysatay mudada ka badan nus qarniga.
Maayar ku xigeenka caasimada Hargeysa oo dhawaan ka soo laabtay safar uu ugu maqnaa dalka Ingiriiska oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu somaliland ku soo marti qaaday maayaro u dhashay dalkaasi.
Maayarka ku xigeenka magaalada Hargeysa oo ka hadlaya maayarada uu soo marti qaaday iyo sababaha aanu u shaacinayn waxa uu yidhi “Xidhiidh badan ayaanu soo samaynay, hawlo amni dartood ayaanan u sheegayn maayaro badan oo aanu soo casuunay, marka ay yimaadaana xidhiidho kuwii ka duwan ayey ku imanayaan
waxaanay samaynayaan waxqabad dhab ah, waxaanay raacinayaan wixii ay imika qabanayaan iyo sida ay u qabanayaan.”ayuu yidhi maayar ku xigeenka caasimadu.
Sidoo kale maayar ku xigeenka Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi ayaa si cad uga hor yimid xeerka horyaala golaha wakiilada waxaanu yidhi “Shuruucda baarlamaanka ka yimaada waan u hogaansamaynaa laakiin waxaan u sheegaynaa in xeerkan hore loo sameeyey haddii ay wax badal lagu samayn lahaana horeba loogu sameeyey, wax qabad badana waanu muujinay, intii maayarada iyo xigeenada la odhan lahaa xeer dhan haloo badalo waxa ka fiican iyada oo si ka wanaagsan la sameeyo.”
Maayar ku xigeenka Hargeysa oo ka hadlayo hawlaha aanu shaqada ku lahayn ee ictiraaf raadinta oo uu qiil uga dhigayo in laga daayo xeerka horyaala golaha wakiilada ayaa waxa uu yidhi “Baarlamaanka Ingiriiska weedhoodu meel fog ayey gaadhaysaa, kaas ayaanu somaliland uga doodaynay waxaanay ahayd in shahaado nala siiyo laakiin may ahayn in xeer naloo badalo.”